Muwaadin U Is-Taag Oo Difaac Dastuurkaaga Ku Siiyay Awooda Iyo Karaamada Qaranimo Adiga/Shacabka | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Muwaadin U Is-Taag Oo Difaac Dastuurkaaga Ku Siiyay Awooda Iyo Karaamada Qaranimo Adiga/Shacabka
Somaliland waxa lagu wada joogo ee isku hayaa waa 130ka qodob ee Dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland, sidaas darteet shalay waxa ka dhacay Golaha Wakiiladu ma wafaqsana sharciga iyo Dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland, wax kasta oo baal marsan dastuurka ummadani u codaysayna waa sharci daro iyo afganbi! waayo hadaan qoladan dawlada jin si qaldan ugu fasirin qodobka 53aad faqradiisa 3aad ee Dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland, waxa uu awooda iyo masuuliyada ansixinta heshiisyada siinaya Golaha Wakiilada oo kali ah.
Qodobka 53aad-faqraddiisa 3aad waxa uu dhigan yahay sidan: golaha wakiiladu waxa uu ansixinayaa heshiisyada dawliga ah ee ay ka mid yihiin kuwa siyaasadeed, dhaqaale iyo nabadgelyo ama kuwa keenaya culays maaliyadeed oo cusub oo aan ku soo aroorin miisaaniyadda, ama keenaya soosaarid ama wax-ka beddelid qaanuun. Sida ku cad qodobkan ma aragno meel Golaha Guurtida loogu baneeyay in ay la yeshaan masuuliyad iyo wajibaadka ansixineed Golaha wakiilada, arintani waa sharcigii ummadan oo lagu tumanaayo ummadana ma’aha in la gumeeyo ee waa in sharciga loo soo noqdaa odaygan Salebaanna dalka qabyaaladda iyo jujuubka haka daayo.
“Shacabku ha tooso weyaan waayo awooda iyo karaamada qaranimo shacabkaa iska leh”
Qalinkii: Cabdikariim Axmed Mooge